Likuphi Tolmachevo Airport - sezindiza elikhulu kunawo wonke eSiberia
Likuphi Tolmachevo futhi ukuthi iyini, uyazi yini wonke umuntu. Nokho, abahambi ngokuqinisekile uqaphele ukuthi lokhu kuyinto sezindiza zamazwe ngamazwe ku Novosibirsk. Kuyinto enkulu kunazo zonke eSiberia. Lena engeyokuqala ukhiye phezu imizila kusuka eNyakatho neMelika eNdiya, e-Asia, nase-South-East Asia eYurophu. Kusukela sezindiza sihlanganisa lonke izwe laseRussia iyatholakala. Tolmachevo - liphinde phansi izindiza zempi of Russian Air Force.
Lona kuphela sezindiza zamazwe ngamazwe ku Novosibirsk. Isikhundla ngqo lapho Tolmachevo - kuyinto km 21 kusuka enhlokodolobha yeSiberia, edolobheni satellite we-OB. Yisebenzise hhayi kuphela izakhamuzi Novosibirsk, kodwa futhi abantu bevela emizini eduze: Barnaul, saseTomsk, eKemerovo, Novokuznetsk. Iqiniso liwukuthi kusuka kule nombolo enkulu izindiza flying kwamanye amazwe. Yingakho izivakashi eziningi zithanda izindiza ngqo engami, travel eNovosibirsk.
Isikhumulo sezindiza yasungulwa ngo-1957. Julayi 12 wayesema esibhakabhakeni esuka indiza umgibeli lapha kuqala, eduze eMoscow. Kuze kube kuleli qophelo endaweni lapho Tolmachevo sasibhekwa njengophawu lokuthi kuphela ishashalazi lezindiza zempi.
ezinkulu isakhiwo esibulalayo wavulwa emva kweminyaka 5, okuyinto ukwazi ukuthumela abantu 1,000 ngehora. Passenger traffic lenyukile kuleminyaka edlule. Sekuyisikhathi ukwakha hhayi kuphela entsha lomoya kokwehla emapheshana, kodwa futhi ukuphela entsha.
Ngaphambi kuka-1992, kusukela Novosibirsk flying kuphela okuhleliwe izindiza yasekhaya eRussia. Kodwa ngonyaka th 92 esikhumulweni sezindiza wathola isimo ngamazwe. Okokuqala umkhankaso bebheke Indonesia, eJalimane, UAE kanye China.
Manje sezindiza Tolmachevo iyona 5 umgibeli walo omgwaqo sihlanganisa lonke izwe laseRussia. Ngo-2015, isibalo sabantu abasebenzisa amasevisi zayo, zaba cishe izigidi ezingu-4. Ihlanganisa indawo enkulu 618 amahektha futhi has zezindiza ezimbili.
Futhi makungabikho muntu owaziyo ngempela lapho sezindiza Tolmachevo kodwa lokhu yayiyindlela iphuzu elibaluleke kakhulu of civil aviation eRussia. Lokhu Zindiza njengokhozi izindiza izindiza yasekhaya futhi ethwala ngamazwe.
Volkovysk, umsebenzi wokulinganisa: zonke "Belarusian Maldives"
Wellington, New Zealand ezikhangayo New Zealand inhlokodolobha Wellington, izithombe, isimo sezulu, isimo sezulu
Dacha kukaStalin ngo Abkhazia: izithombe kanye nokubuyekeza
Amazing Bulgaria. Tsarevo kanye namasiko alo lasendulo
Phumula ku Veselovka emzaneni: ukuzilibazisa, yokuhlala, ukuzijabulisa
Siena edolobheni Italian ezikhangayo
Magnitogorsk - lokho endaweni? Magnitogorsk: sezulu, nemvelo, ezikhangayo
I-Lugansk i-cartridge factory: umlando, ukukhiqizwa, imikhiqizo
Uhlaziyo inkondlo "Autumn" Karamzina N. M.
Big Terenkul, ukuzilibazisa isikhungo "Sphere": incazelo
Bonisa "Iphupho Lesiprofetho '(Circus of Vernadsky): incazelo, ukubuyekezwa
Lapho ikholoni: umsebenzisi ukwenza imisebenzi
Kuyini welibhola letinyawo? ukuhlaziywa enemininingwane
Iposi Sweet: indlela ukupheka muffins ngaphandle amaqanda nobisi
Lots ku Ryazan esifundeni eMfuleni Oka - imali isetshenziswe kahle
Indlela yokwenza umnyango beya ngezandla zakhe? imiyalelo iDemo
Imyuziyamu kaVera Mukhina: ikheli, isithombe kanye nencazelo yesichazelo